Ny tanjona 24 Angel Tattoos tsara indrindra ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy - Tattoo Ideas Art
Ny endrika 24 Angel Tattoos tsara indrindra ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy
sonitattoo Jolay 30, 2016
Indraindray, mahita tato an-tetik'Anjely izay manaisotra ny fofonay fotsiny izahay. Manontany tena ve ianao hoe inona no dikan'ny hoe tatoazy toy izany ao amin'ny vatanao?
Ny tato an-doha dia tsy hafahafa noho ireo dikany mahafinaritra izay misy azy. Tokony ho hitanao ny #angle izay lavo izay manana ny heviny manokana. Na inona na inona nataon'ilay anjely taminareo, dia mbola manome heviny manokana ianareo. Ilay anjely #tattoo dia tsy mitsangana amin'ny zavatra ratsy. Miresaka momba ny fijoroana eo amin'ny fanamby izy ireo na mihetsika mandritra ny fotoan-tsarotra. Ireto ny sasantsasany amin'ireo dikany izay miaraka amin'ny tato anelanelan'ny anjely.
Ny hevitry ny anjely dia afaka miova ihany koa amin'ny fomba ampiasain'ny mpampiasa azy. Ny fahamoram-panahy sy ny fiadanana dia afaka misolo tena ny anjely amin'ny vehivavy raha toa ka afaka manamboatra anjely araka izay tiany ny lehilahy. Miaraka amin'ny elatra ireo anjely dia miavaka amin'ny zavatra hafa. Ny anjely dia azo apetraka amin'ny marika rehetra mba hahatonga azy hanana dikany manokana. Rehefa handeha ho an'ny anjomara anjelinao ianao, dia ilaina ny manana ny #idea mety aminao handika ny anjanao amin'ny dikany.
1. Taratasy an-dantelina mamy ho an'ny ankizivavy amin'ny ankilany
Ny fomba hijerena chic raha tsy misy tabataba betsaka dia ny fahazoana an'io tatoazy io. Tsy misy fanavakavahana eo amin'ny lahy sy vavy amin'ny ankapobeny an'ity tato an-doha ity. Na ny mpianatra aza dia tsy mivoaka raha toa ka misy tato an-jambany iray mahafinaritra toy izany.
2. Tapa-tavoahangy fananganana an-tetikasa ho an'ny lehilahy
Ny #design izay azonao rehefa misafidy amin'ireo tato an-tserasera an'arivony tadiavinao dia misy zavatra mahatonga anao hijoro. Fantatsika fa manan-danja ny anarantsika ary koa anjely tattoos sy ny dikany.
3. Teboka feno tato an-tato an-doha ho an'ny ladie
Ny fahatsapana fa azontsika avy amin'ny tattoo-ny anjely dia zavatra tsy afaka mamaritra izany fomba fiteny izany.
4. Ankafizin'ny anjely tia tato ho an'ny lehilahy amin'ny tanan'akanjo
Tattoo-n'ity anjely ity toy izany dia tena tsara tarehy. Raha te hifidy tato an-jatony toy izany ianao dia miantoka fa manana mpanakanto ianao izay tsara amin'ny sehatra misy azy.
5. Fanangonana tato ho an'ny fananganana tato ho an'ny lehilahy miaraka amin'ny hafatra
Miaraka amin'ny isan'ireo olona miditra amin'ny varotra ny tatoazy an-jatony dia mety ho sarotra ny misafidy mpanakanto tsara.
6. Super tato ho an'ny tato ho an'ny lehilahy eo amin'ny soroka
Izany no antony tokony handraisanao fotoana hijerena ny fahaiza-manaon'ilay mpanakanto tianao hofidiana. Ny tatoazy an-tsokosoko ratsy dia mety ho korontana eo amin'ny fiainan'ny olona iray.
7. Ankafizin'ny anjely tattoo ho an'ny lehilahy eo amin'ny tanana
8. Lolo vavy sy tato an-tato an-dantan'ny vehivavy eo amin'ny tànan'akanjo
Tsy misy ampahany amin'izao tontolo izao izay tsy ahitanao olona miaraka amin'ny tatoazy an-keriny. Tateraka lamaody ny tato an-danitra izay afaka manome aloa ny manankarena sy ny mahantra. Ny fiangaviana manokana izay ataon'ny tatoazy an-tsehatra amin'ny mpitaona azy dia mety ho tsapa raha hita.
9. Volo amin'ny antsasaky ny taovolo, totozy tato an-tenda ho an'ny ankizilahy
Nahita olona tonga niaraka tamin'ny endrika tatoazy mahagaga toy izany izahay.
10. Teteza feno tato ho an'ny elatra farany ho an'ny vehivavy any aoriana
Ny tato-tarehin'ny anjely iray toy izany dia mahatonga ny fahasamihafana rehetra rehefa mahazo azy eo amin'ny tapany ankavanana amin'ny vatanao. Maro ireo toerana izay ahafahanao mahazo tato anelanelanao. Ny vidin'ny fangalarana dia miovaova amin'ny toerana iray mankany amin'ny iray hafa.
11. Tattoo feno tato an-tselana miverina ho an'ny zazavavy
12. Angel mitolona amin'ny demokrasia amin'ny tato an-devoly
Eritrereto ireo zana-kavina malefaka malemy sy tsara tarehy izay miely patrana ao an-damosinao. Angamba, nisy anjely feno iray nijery anao teo an-tsoroka na ny sarin'ny elatry ny anjely teo an-damosinao. Ny hevitra dia mahaliana sy mahavariana hoe inona no antony mahatonga ny olona maro ho azy ireo. loharanon-tsary
13. Anjely manan-danja miaraka amin'ny sabatra tato ho an'ny famoronana tato ho an'ny zazavavy any aoriana
Ny olona tsirairay izay mitaingina elatra misy elatra misy elatra na anjely iray feno dia manana zavatra holazaina amintsika momba ireo tatoazy mahafatifaty. Angamba, namoy olona iray manokana ho azy ireo izy na efa nahazo olona manokana eo amin'ny fiainany. loharanon-tsary
14. Tattoo feno taovolo feno taolam-paty ho an'ny lehilahy any aoriana
Manana fifandraisana akaiky foana ny tsirairay amin'ireo izay mampiasa io tetikasa io eo amin'ny vatany. loharanon-tsary
15. Angel manafoana devaluation ny devotion ho an'ny lehilahy eo amin'ny vatana
Indraindray, milaza amintsika ny olona fa ireo tatoazy ireo dia natao ho an'ny fahalalahana. Ny fampiasana ny tato amin'ny anjely dia maneho fitiavana, ara-panahy ary fiarovana; izay mety ho zavatra avo kokoa noho ny olona manao azy. Na dia misy aza ny olona manao ny tatoazy ho an'ny vintana tsara. loharanon-tsary
16. Zana-totoingan'ny anjely tato ho an'ny lehilahy ao ambadika
Ireo tatoazy ireo dia tonga amin'ny endrika sy tarehy samihafa. Ny sasany amin'izy ireo dia mety hitovy amin'ny anjely izay mijery ary indraindray, mety hijery kely fery izy loharanon-tsary
17. Mpilalao horonantsary sy tato an-tato an-doha ho an'ny vehivavy eo amin'ny tanana
Izany rehetra izany dia miankina amin'izay azon'ilay tatoazy atao. Tsy misy milaza ny zavatra azonao tanterahana raha tianao ny hahazo ny tato an-tanjonao manokana. loharanon-tsary
18. Romantika ho an'ny teti-panavotana romantika ho an'ny lehilahy amin'ny tànan'akanjo
Azonao atao mihitsy aza ny manoratra ny tatoazy araka ny fanirianao manokana. Fantatra fa ny loko maizim-be dia mety hiresaka momba ilay anjely lavo na ny lafiny hafa amin'ny fiainana. loharanon-tsary
19. Ankizivavy kely tia tato ho an'ny tato ho an'ny zazavavy ao an-damosina
Ny loko mamirapiratra dia afaka milaza ny tsara. Ny fampiasana anjely tattoos dia mety amin'ny elatra izay afaka mikatona na manokatra. loharanon-tsary
20. Tattoo sexy tattoo mamorona hevitra ho an'ny vehivavy any aoriana
Tianao ve ny manao tatoazy? Azo atao ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy izany. loharanon-tsary
21. Anjely mitaingina tapa-tady ho an'ny zazavavy any aoriana
Ireo anjely tatoazy dia tonga amin'ny endrika na hevitra samihafa. Miankina amin'ny zavatra tianao haseho amin'ny vatanao izany rehetra izany. Toy ny tatoazy toy izany dia tena mahafinaritra ary na dia tsiambaratelo aza noho ny ampahany amin'ny vatanao izay nametrahanao izany. loharanon-tsary
22. Anjely mahafinaritra miaraka amin'ny firavaka ho an'ny vehivavy eo amin'ny ankilany
Alao sary an-tsaina ny halehiben'ity angaloha ity sy ny fomba ahafahan'izany fahatsapana izany rehefa mahita azy io aminao ny olona. Na dia ireo vehivavy aza dia ho tia azy. loharanon-tsary
23. Anjely manan-dihy mihetsiketsika ho an'ny zazavavy eo amin'ny tànan'akanjo
Ahoana ny hevitrao momba ny tati-tsoatra toy izao? loharanon-tsary
24. Tovolahy tato ho an'ny tato ho an'ny lehilahy amin'ny tonta
koi fish tattootattoo ideasAnkle Tattoosarrow tattooscorpion tattootattoo eyetatoazy lolomasoandro tatoazyanjely tattoostattooshenna tattootattoos sleevediamondra tattootattoo octopustattoo cherry blossomcompass tattoomoon tattoostato ho an'ny vatofantsikacat tattoostatoazy voninkazotanana tatoazytattoos mahafatifatytattoos foottattoo infinityHeart Tattoostratra tatoazyraozy tatoazytattoos crosstattoos voronaloto voninkazotatoazy ho an'ny zazavavyfitiavana tatoazyelefanta tatoazyNy zodiaka dia mampiseho tatoazyTattoo Feathertattoos mpivadytatoazy fokotattoos backtattoos armtattoo watercolortattoos rahavavymozika tatoazylion tattoosrip tattooseagle tattoostattoos ho an'ny lehilahynamana tattoos tsara indrindraTatoazy ara-jeometrikamehndi designtattoos